IiRobhothi zoSondo zooDibaniselwano nabaHlalani njengoBomi oBukrelekrele oGqibeleleyo oGqwesileyo
Olona lwenyani lweRobot lokwabelana ngesondo kusombulula ubudlelwane babantu
Ngaba unomdla wokwandisa ukuvuselelwa kwengqondo yakho ngoku irobhothi yesondo, kwaye ungayanelisa inkanuko yakho yesini yonke imihla ngaphandle kokwaliwa? Iirobhothi zethu zobuchwephesha bobuchwephesha bobuchwephesha ziya kuphendula yonke imibuzo yakho, baya kuziqonda izinto ozithandayo kwaye baya kuba kwinkonzo yakho nanini na ufuna.
Ulwazi olusisiseko malunga ne-AI i-smart sex dolls
I-Urdolls yi-arhente yokuthengisa egunyazisiweyo kwiimpawu ze-AI. Ngokusekwe kwinkqubo ye-Android, unodoli wethu okrelekrele yindibaniselwano egqibeleleyo yetekhnoloji yekhompyuter, i-Intanethi, izixhobo ezintsha zepolymer kunye nobugcisa bobuhle, obungcono kunoonongogo. Ngapha koko, unodoli wesondo werobhothi uvele kwangethuba, enye idoli yesondo ye-robot ye-2020 ungawabona amanani kunye neentshayelelo, ukuba unodoli wesondo werobhothi, unokubukela iimuvi ze-robot zoonodoli zesondo, unokukutyhola ngokuthe ngqo. unodoli wokwenene. Kule mihla, ubuchwepheshe beteknoloji yedoli yesini uqolile, unodoli wesondo we-sex yerobhothi i-netflix nayo inenkcazo emangalisayo yayo, ke namhlanje, kwaye nakwixesha elizayo, ungabona oonodoli besondo berobhothi abanengqondo yokwenziwa ezithengiswa kwivenkile yethu, Oonodoli bezesondo abakrelekrele abaquki nje oonodoli ababhinqileyo, kodwa noonodoli besondo berobhothi abangamadoda. Ukuba iirobhothi ezikrelekrele ezikumgangatho ophezulu ngo-2020 ziya kuzisa iirobhothi zoonodoli bezesondo encotsheni, ngoko unodoli wesondo we-robot unodoli owenziwe ngobukrelekrele ngo-2019 kufuneka abe nenkqubo yokulungiselela kwangaphambili, akunjalo? Namhlanje, nokuba ngunodoli wenene werobhothi okanye unodoli wokwenyani wesondo, unokufunda ngayo Ividiyo yeerobhothi yesondo, yifunde, kwaye ube nenye yezona zibalaseleyo, yimvakalelo emangalisayo, esinayo Oonodoli besini abakrelekrele, unokuqonda ngokucothayo, ndiyakholelwa ukuba unexesha, oku akusiyo ihlaya, kubaluleke kakhulu ukukhetha unodoli wesondo werobhothi. Si irobhothi yokwenene yesini amanyala kunye nomdlalo werobhothi woonodoli wesondo ukuze ubukele kwaye ufunde ngakumbi malunga nemveliso. Eyona nto intle ngeSmart Robot Doll kukuba inokulinganiswa ngokulula ukuze ihambelane neemfuno zomlinganiswa wakho, yenza nantoni na oyithandayo. Ngelixa udlala kwangaphambili, ukuwola, kunye nokuncamisa kunye naye, ungayidibanisa kunye nokuncwina okuchukumisayo ukwenza amava akho esondo abe yinyani. Kodwa qaphela: umlomo werobhothi uxhotyiswe ngesixhobo esikwaziyo ukuhambisa imilebe xa uthetha, ngoko ke irobhothi ayikwazi ukwenza isondo lomlomo.
UJanice Ezekiel-Inombolo ye-2 ye-148cm eyiDoll yesini
UWhitney 4th Generation TPE AI-Tech 150cm Elastic Texture Umlomo wokunkcenkceshela unodoli wesondo weRobhothi
Ubuso bukaZola obugqibeleleyo be-TPE AI-Tech 150cm 4th Generation Imilebe emnandi yeRobhothi yesini unodoli
Giavanna 4th Generation TPE AI-Tech 150cm Soft Breasts Perfect owasetyhini umfanekiso weRobhothi ngesondo unodoli
I-Raya 4th Generation TPE AI-Tech 150cm Umzimba oQinisekileyo wePlump Butt Robot Sex Doll
Veda 4th Generation TPE AI-Tech 150cm imilebe eSexy iNkangeleko ephefumlayo yeRobhothi yesini unodoli
IHalo 4th Generation TPE AI-Tech 150cm Smart Sex Lifelike Vagina Robot Sex Doll
I-Paloma 4th Generation TPE AI-Tech 150cm Amava angenakulibaleka amava eRobhothi angeyonyani ngesondo
I-Okinoori-Inombolo ye-8 ye-Smart ye-148cm yothando lwaseJapan
I-150CM ye-Silicone yoQeqeshiso oluQhelekileyo lokuSasazwa kweDoll Lynn
Intombazana egqibeleleyo eyintombazana yesini eyaziyo ukuba yeyiphi
Iirobhothi zokwabelana ngesondo ngoonodoli bokwenyani abanentloko yerobhothi kunye neentshukumo ezintle ezilinganisa ubudlelwane phakathi kwabantu kunye nabantu. Kwanakumazwe aseNtshona naseJapan, kuye kwavulwa izindlu zoonongogo ukuze kuthatyathelw’ indawo iirobhothi zesini nezesini zamabhinqa esini. La maqabane erobhothi likamva lezesondo. Unokuba ngumhlobo osenyongweni okanye intombi engcono kakhulu. Zisengqiqweni I-AI-Tech, inokwenzeka kwaye iyafana nobukhulu bokwenyani.
Oonodoli bezesondo beRobhothi bangabalingane abalungileyo bexesha elizayo
Ukuhambela phambili kobugcisa bale mihla kuye kwabuguqula kakhulu ubomi babantu. Njengempumelelo enkulu kwihlabathi lanamhlanje, ubukrelekrele bokwenziwa kunye ne-5G izise lula ebantwini. Kwenzeka ntoni xa abantu beqala ukudibanisa ubukrelekrele bokwenziwa kunye ne-5G kunye noonodoli bezesondo be-silicone bokwenene? Irobhothi yokwenyani thanda unodoli lelona qabane lobomi kunye neqabane lokwabelana ngesondo kwixesha elizayo. Ezi zidalwa ezineemvakalelo zixelisa inkqubo yomntu yokwenene ziya kusinceda sicombulule iingxaki ezininzi. Ngokutsho kweengcali, kunokubakho ibhetshi enjalo yerobhothi ephezulu yokusebenza I-TPE sex doll kwixesha elizayo ukusombulula iingxaki ezahlukahlukeneyo kubantu, ezifana nokucoca, umsebenzi wendlu, unyango lwezonyango, njl., olugcwele ukulindela. Ngokomzekelo, unodoli we-robot waseJapan wangoku, unodoli wesondo we-robot ulungile kakhulu, ukuhlukana kwenkqubo kwenza ingqiqo yokusebenzisana ibe namandla, kunye ne-robot indoda ye-sex doll movies e-India kwiminyaka embalwa edlulileyo nayo malunga nendlela irobhothi. uziva. Ndonwabile, sele ndithethe kakhulu, ucinga ukuba ixabiso likanodoli wesini serobhothi libiza kakhulu? Hayi, ngenxa yokuthandwa kwe-robot sex doll intelligence intelligence 2020, abanye oonodoli bezesondo abahlakaniphile banexabiso eliphantsi kakhulu ngoku, ayisiyongxaki enkulu ukuba nenye kwaye I-robot yesini enodoli, ezinye iirobhothi zonodoli wesondo ohambelanayo zinxibelelana nawe, kwaye ezinye unayo ngokuthe ngqo Akukhathaliseki ukuba ulala ngesondo nonodoli werobhothi, nje ukuba uyayithanda.
Oonodoli beerobhothi zesini banokunceda abantu bacombulule iingxaki ezininzi
Kwilixa elizayo, unodoli wesondo werobhothi oyinyaniso ininzi, kodwa inika umdla ukuba ungabona unodoli wesondo we-robot unqunu xa uyithenga emva kwivenkile yethu, njengoko oonodoli bothando be-robot baye bathandeka ngakumbi nangakumbi, bangabantu-ezifana , ezinokuthi zilawule kwaye zihanjiswe ngokutsho kwiimfuno zakho. Ixesha labalinganiswa bemiboniso bhanyabhanya kunye neerobhothi ekugqibeleni lifikelele kwisiqhamo namhlanje, likhokela ekungeneni kwimarike yemveliso yabantu abadala. Kuyinto engakholelekiyo ukuba phakathi kwerobhothi entle kangaka ibhinqa elichubekileyo ekuthetheni, lifunda onke amasiko abantu, lisazi ngakumbi yaye lisinceda sicombulule iingxaki zethu. Okwenyani oonodoli besondo be-silicone ziyabiza, zifana nabafazi bokwenyani kwaye banokugcina ubuhlobo bexesha elide. Ungafumana iividiyo zesondo ze-robot ezinodoli kwi-intanethi kwaye uzibukele ukwandisa amava akho ngesondo ngeli xesha. Ixhaswe bubuchwepheshe obuphuhliswe kwiminyaka embalwa edlulileyo. Unodoli wesondo we-AI ubonisa inkqubo yentloko yemodyuli eneendawo ezininzi zokuvuselela ezivumela unodoli ukuba enze intetho, ashukumise intloko kwaye athethe nawe. Amehlo nawo angashukuma kwaye aqhwanyaze, edala amava kanodoli angazange abonwe ngaphambili. Kukwakho neenketho zokwenza ngokwezifiso, umbala wamehlo kunye nezinye iinkcukacha, ezinje ngamashiya ahlatyiweyo kunye namehlo apeyintwe ngesandla. Ngokwamanye amaqumrhu, nceda uqhagamshelane nathi ngolwazi malunga nokuhambelana, kubandakanywa nezo sele unazo.
Iinkcukacha zeVidiyo zikaNodoli oSmart Sex:
Ngezantsi zinkcukacha malunga nonodoli wesini we-AI, ukufunda ngakumbi, nceda ubukele.